Katt Williams ayaa Tiffany Haddish ku qarxisay, waxayna ku andacooneysaa inaysan cadeyn kartideeda ah inay kaftan u sheegto - Dhaqanka Pop
Katt Williams ayaa Tiffany Haddish ku qarxisay, waxayna ku andacooneysaa inaysan cadeyn kartideeda ah inay kaftan u sheegto
Fiidiyowga ka fog V-103 Atlanta
Katt Williams wuxuu qabaa fikrado badan oo ku saabsan Tiffany Haddish. Oo aan u sheegno inaysan si sax ah u faanin.
Inta lagu jiro muuqaalka V-103 s Frank iyo Wanda Subaxdii show, Williams wuxuu galay tiro ka mid ah majaajilaystayaasha kale, oo ay ku jiraan Lil Rel Howery, Jerrod Carmichael, Kevin Hart, iyo Hannibal Buress; si kastaba ha ahaatee, waxay ahayd Safarka Gabdhaha xiddig goosgoos ah oo helay dhaleeceynta ugu badan.
Williams, oo hadda helay Emmy doorkiisa martida Atlanta , waxay isku dayday inay sumcadda ka saarto Haddishs iyada oo u soo jeedisay inaysan qorin agabkeeda oo aysan weli isku caddayn inay tahay majaajilis sharci ah.
[Haddish ayaa] samaynaysay majaajiliiste ilaa 16 jirkeedii. Waayo? Sababtoo ah iyadu wali dalxiis ma aysan sameyn. Iyadu ma samayn gaar ah. Ma aysan caddayn kartida ay u leedahay kaftanka, dib ugu noqoshada muddo saacad ah, ayuu yiri (6:28). […] Dhammaantood waxay diyaar u yihiin inay hoos u dhigaan MoNique iyo inay kor u qaadaan qof iyaga tusay Safarka Gabdhaha . Ma u malaynaysay inay qortay Safarka Gabdhaha , goofball? Mise waxaad u malaynaysaa in taasi hore u ahayd qoraal oo ay u dhiibeen? Waxay ku xiran tahay wax kasta oo aad rabto inaad rumaysato.
sida loo sameeyo pie peach pie buuxinta fersken qasacadaysan
Martida loo yahay Wanda Smith ayaa markaa isku dayday inay difaacdo Haddish, iyadoo ku adkaysatay in la jeclaystay maxaa yeelay waa run. Williams ayaa su’aal gelisay markii dhabta noqotay suuq-geynta, ka dibna waxay sheegatay in warshadu ay iyada uun jeceshahay maxaa yeelay waxay doonaysaa inay la seexato nin caddaan ah, iyada oo tixraaceysa burburinteeda aan qarsoodiga ahayn ee Brad Pitt.
Williams ayaa markaa ammaanay tiro kale oo majaajiliisteyaal dumar ah oo madoow ah - sida Luenell, Melanie Comarcho, iyo Miss Laura - dhammaan dadkii ka booday.
Ujeedadu waxay tahay waxaan ku jirnaa meheradda kaliya ee sida naag madow ah, waxa aad u egtahay aan loo malaynaynin in lagugu haysto, ayuu yidhi. Oo had iyo jeer, waxay ku tusayaan inaad ka leexan karto wax kasta oo maqaar-khafiif ah leh. Markaa, garaac
Waxaad ka daawan kartaa wareysiga kore.
Haddish, oo sidoo kale qabtay Emmy bishan, ayaa ka jawaabay faallooyinka Williams ee Twitter.
sida loo sameeyo cake fondue
waxa loo isticmaalo qurxinta keegga
dhoolatusyada kubbadda koleyga oo lagu sameeyo guriga